E Nye M Ọrụ, Olee Otú M Ga-esi Rụwa Ya Ozugbo Kama Ịna-asị Mgbe E Mechara? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
E Nye M Ọrụ, Olee Otú M Ga-esi Rụwa Ya Ozugbo Kama Ịna-asị Mgbe E Mechara?
Ọ̀ na-abụ papa gị ma ọ bụ mama gị nye gị ọrụ, ya ana-esiri gị ike ọrụrụ? Ọ̀ na-abụ onye nkụzi gị nye gị ihe ị ga-ede n’ụlọ, ya ana-esiri gị ike ide? Nke bụ́ eziokwu bụ na isiokwu a ga-enyere gị aka ịna-eme ihe a sị gị mee kama ịna-asị mgbe e mechara gị emee ya, ọ bụrụgodị na
i chere na ị gaghị emeli ya.
ị chọghị ime ya.
i nweghị efe.
Ị gụchaa isiokwu a, gbaa mbọ zaa ajụjụ ndị anyị jụrụ gbasara mmadụ ịsị mgbe e mechara.
Baịbụl gosiri na mmadụ ịhapụ ihe o kwesịrị ime na-ekwu na ya ga-eme ya ma e mechaa adịghị mma. O kwuru, sị: “Onye na-ele ifufe agaghị agha mkpụrụ; onye na-ele ígwé ojii agaghịkwa ewe ihe ubi.”​—Ekliziastis 11:4.
Ka anyị tụlee ihe ụfọdụ nwere ike ime ka mmadụ na-asị e mechaa ya emee ihe a sị ya mee nakwa ihe ga-enyere ya aka ịkwụsị àgwà a.
Nke bụ́ eziokwu bụ na o nwere ihe e nwere ike ịsị mmadụ mee ya adị ya ka ọ̀ bụ ya hapụgodi ya e mechaa ya emee ya. Ihe ụfọdụ nwere ike inyere gị aka bụ:
Emela ihe ahụ otu mgbe, mewe ya obere obere. Amarachi kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mmadụ asị m mee ihe ma oge m kwesịrị iji eme ya agawala, anaghị m eme ihe ahụ niile otu mgbe. M na-eme ya obere obere.”
Bido ozugbo mewe ya. Chinasa kwuru, sị: “A sị gị mee ihe, mewe ya ozugbo. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị na-eme, ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, dee ihe ahụ a sị gi mee n’akwụkwọ ka ị ghara ichefu ya.”
Jụọ ndị ọzọ otú ị ga-esi eme ya. Papa gị, mama gị, ma ọ bụ onye nkụzi gị nye gị ọrụ, i nwere ike ịjụ ya otú ị ga-esi eme ya. Ha ga-enyere gị aka ịma otú ị ga-esi eme ya.
Ihe I Nwere Ike Ime Adaeze kwuru, sị: “A sị gị mee ihe, dee otú ị ga-esi eme ya n’akwụkwọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ ga-eme ka ị ghara izu ike ma i mebeghị ya. Ma, ọ bara uru. Ọ ga-enyere gị aka ime ihe ahụ mgbe i kwesịrị ime ya.”
Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ihe a sị gị mee bụ ihe ị na-anaghị achọ ime. N’ihi ya, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na a sị gị mee ihe ị na-achọghị ime? Ihe i nwere ike ime bụ:
Gbalịa mara ihe mere i kwesịrị iji mee ihe ahụ n’oge. Dị ka ihe atụ, obi ga-adị gị ụtọ ma i mechaa ya. Ebere kwuru, sị: “Obi na-adị m ụtọ mgbe ọ bụla m mechara ihe a sị m mee n’oge. Obi na-adịkwa m ụtọ ma m mechaa ya tupu oge e nyere m eruo. Nke a na-eme ka obi ruo m ala.”
Cheta ihe ga-eme ma ọ bụrụ na i meghị ihe ahụ n’oge. Ọ bụrụ na ị meghị ya n’oge, ọ ga-eme ka ọrụ zuo gị ahụ́. O nwekwara ike ime ka ị ghara ịmete ihe ahụ. Baịbụl kwuru, sị: ‘Mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, ọ bụ ya ka ọ ga-aghọrọ.’​—Ndị Galeshia 6:​7.
Gbalịa ka i mechaa ya tupu oge e nyere gị eruo. Nneka kwuru, sị: “Ọ na-abụ a sị m mee ihe ma gwa m mgbe m ga-emecha ya, m na-agba mbọ mechaa ya otu abalị ma ọ bụ abalị abụọ tupu ụbọchị e nyere m eruo. Nke a na-abara m uru. M na-eji oge fọdụrụnụ legharịa ya anya, jirikwa ya mee ihe ndị ọzọ bara uru.”
Ihe I Nwere Ike Ime Ezinne kwuru, sị: “Ị ga-emecha ihe a sị gị mee ma ọ bụrụ na i kpebie na ị ga-emecha ya. Ọ bụrụ na i jiri obi gị niile na-eme ihe ahụ, o nweghị ihe ga-eme ka ị ghara imecha ya. Ọ bụ ihe a ka m na-eme. M na-emechakwa ihe a sị m mee tupu oge e nyere m eruo.”
Chibuike kwuru, sị: “Ndị mmadụ na-ekwukarị na ọ na-abụ a sị m mee ihe mụ ahapụgodi ya na-eme ihe ọzọ. Ma, ha amaghị na anaghị m enwe efe.” Ọ bụrụ na ihe mere na ị naghị eme ihe a sị gị mee ozugbo a gwara gị ya bụ na ị naghị enwe efe, gbalịa mee ihe ndị anyị ga-agwa gị ugbu a.
Buru ụzọ rụọ ọrụ ndị na-ataghị akpụ. Chidimma kwuru, sị: “O nwere onye gwara m na ọ bụrụ na mmadụ a sị m mee ihe na-agaghị ewe m nkeji ise, m kwesịrị ime ihe ahụ ozugbo. O nwere ike ịbụ idowe ụlọ ọcha, ikowe uwe gị, ịsa efere, na ịkpọ mmadụ n’ekwentị.”
Mara ihe ndị ị ga-ebu ụzọ eme. Baịbụl kwuru, sị: “Chọpụta ihe ndị ka mkpa.” (Ndị Filipaị 1:10) Olee otú ị ga-esi eme ihe a Baịbụl kwuru? Nkiru kwuru, sị: “Ana m ede ọrụ niile m nwere n’akwụkwọ. M na-edekwa mgbe m kwesịrị ịrụ ha. Ihe ọzọ bụ na m na-ede mgbe m bu n’obi ịrụ nke ọ bụla na mgbe m ga-arụcha ya.”
Ì chere na otú a Nkiru si eme agaghị ekwe ya mee ihe ọ bụla ọ chọrọ ime? Nke bụ́ eziokwu bụ na i dee ihe a sị gị mee n’akwụkwọ, ọ ga-enyere gị aka ịhazi onwe gị, gị amarakwa mgbe ị ga-eme nke ọ bụla. Nke a ga-eme ka obi ghara ikoro gị n’elu. Amaka kwuru, sị: “Ide ihe m chọrọ ime n’akwụkwọ na-eme ka obi ruo m ala. Ọ na-emekwa ka m mara mgbe m ga-eme nke ọ bụla.”
Ekwela ka ihe ọ bụla megharịa gị anya. Nwakaego kwuru, sị: “Ọ na-abụ onye nkụzi anyị nye m ihe m ga-ede n’ụlọ, m na-agwa papa m na mama na ụmụnne m tupu mụ amalite ya. M na-ebukwa ụzọ rụọ ihe ọ bụla ha ga-achọ ka m rụọ. M na-agbanyụkwa ekwentị m.”
Ihe I Nwere Ike Ime Eze kwuru, sị: “Ọrụ gị ga na-eche gị, ọ gwụkwala ma ị rụrụ ya. Kama ịhapụ ya e mechaa gị arụọ ya, rụwa ya ozugbo. Ị rụchazie ya, gị ezuwe ike.”.
Zaa ajụjụ ndị anyị jụrụ gbasara mmadụ ịsị mgbe e mechara.
Zaa Eziokwu ma ọ bụ Ụgha
A gwa gị ihe ị ga-eme, o nweghị mgbe ọ ga-adị mma ka ị hapụ ya e mechaa gị emewe ya.
Ndị na-ekwu na ha ga-eme ihe a sị ha mee ma e mechaa nwere ike ịgbanwe.
Ị ga-arụ ihe a sị gị rụọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na i chere ka oge a sị gị mee ihe ahụ ruo.
Ọ bụ papa gị ma ọ bụ mama gị bufere gị àgwà a.
Ụgha. O nwere ihe nwere ike ime mgbe ụfọdụ mmadụ asị e mechaa ya emee ihe a sị ya mee. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na i cheretụ, ọ ga-enyere gị aka ịmatakwu ihe a chọrọ ka i mee na otú ị ga-esi eme ya, nyekwara gị aka ịkwado nke ọma.​—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 21:5.
Eziokwu. Mmadụ nwere ike ịkwụsị àgwà a. Ihe ga-enyere ya aka bụ icheta uru ndị ọ ga-erite ma ọ kwụsị ya.​—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Efesọs 4:​22, 23.
Ụgha. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-arụcha ya ngwa ngwa. Ma, ị ga-arụta ihe a sị gị rụọ ma ọ bụrụ na ị rụọ ya ngwa ngwa.​—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 15:28.
Ụgha. Ọ bụrụgodị na ọ na-abụ papa gị ma ọ bụ mama gị nwee ihe ọ ga-eme ya asị mgbe e mechara, ọ bụghị iwu na ị ga na-eme otú ahụ.​—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Galeshia 6:5.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ E Nye M Ọrụ, Olee Otú M Ga-esi Rụwa Ya Ozugbo Kama Ịna-asị Mgbe E Mechara?
ijwyp isiokwu 11
Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Banyere Imetọ Mmadụ?​—Nke 2: Otú Ị Ga-esi Enweta Onwe Gị
Gịnị Ga-enyere M Aka ma Mụ na Onye Mụ na Ya Na-akpa Kwụsị Ịkpa?
Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Ihe M Anaghị Amasị Ndị Ọzọ?
Mmadụ Ịna-agba Mbọ Ka A Mara Ya Amara n’Ịntanet Ọ̀ Bara Uru?
Olee Otú M Ga-esi Agwa Ndị Mụrụ M Okwu Gbasara Iwu Ndị Ha Nyere M?
Gị na Chineke Ịdịkwu ná Mma
Gịnị Mere M Kwesịrị Iji Na-ekpe Ekpere?
Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịna-aga Ọmụmụ Ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze?
Olee Otú Baịbụl Nwere Ike Isi Nyere M Aka?​—Nke 1: Na-agụ Baịbụl Gị
Olee Otú Baịbụl Nwere Ike Isi Nyere M Aka?​—Nke 2: Mee Ka Ịgụ Baịbụl Na-atọ Gị Ụtọ
Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Obi Dara M Mbà?
Olee Ihe Ga-enyere M Aka Ịna-emega Ahụ́?
Olee Ihe M Kwesịrị Ime Ma M Mejọọ Ihe?
Gịnị Mere M Ji Ekwukarị Ihe M Na-emecha Kwaara Mmakwaara?
Àbụ M A Kwaa A Kwụrụ?
Ọ̀ Dị Mma Mmadụ Ịna-eme Ọtụtụ Ihe Otu Mgbe?
Olee Ihe M Ga-eme Ka Uche M Na-adị n’Otu Ihe?
Ime Anwansi Ọ̀ Dị Njọ?